Tag: maamulka quudinta ecommerce
Axad, Sebtembar 23, 2018 Axad, Sebtembar 23, 2018 Douglas Karr
In taxane ah wareysiyada Martech bishii la soo dhaafay, waxaan ku yeelanay kafaala - Productsup, madal maaraynta quudinta xogta. Nidaamyada 'Ecommerce' waa kuwo aad u adag maalmahan, iyada oo xoogga la saarayo xawaaraha, waayo-aragnimada isticmaalaha, amniga, iyo xasilloonida. Taasi had iyo jeer ma bixiso qol badan oo loo habeeyo. Shirkado badan oo ecommerce ah, qaar badan oo ka mid ah iibku waxay ka dhacaan goobta. Tusaale ahaan, Amazon iyo Walmart, waa goobo ay iibiyeyaal badan oo ecommerce ah ay ku iibinayaan alaab ka badan xitaa kuwa ay iyagu leeyihiin